Ukuba ngaba abazali banzulu kwaye banembopheleleko malunga nokukhuliswa komntwana, ukuphuhliswa komntwana kuphumelele kakhulu. Unyaka wesine wobomi bentsana kubaluleke kakhulu kwinjongo yengqondo. Ukuba umntwana uhambela esikolweni, abantwana kufuneka bahlale beqhagamshelana nabafundisi kunye nootitshala ukuba badibanise ulwazi nolwazi olufunyanwa yinkomo apho. Ukuba kucetywayo ukuba umntwana uya kukhutshwa ekhaya, abazali kufuneka bazinyamekele ngokucophelela, kuquka neencwadi eziyimfuneko.
Ukubandakanyeka ekukhulisweni komntwana wesine wesibini wobomi, kubalulekile ukukhuthaza zonke iimpumelelo zakhe, kwaye angagxeki kwaye alondoloze nayiphi na iphoso. Ukukhuthazwa kancinci kumntwana kuya kuba yinto evamile yokumomotheka, inomdla kunye nokuvuma. Ukuba ukhulisa ukuzithemba komntwana, ngoko umntwana uya kuzama ngakumbi, kubaluleke kakhulu ukuba abe nomuvo wokuphumelela. Kodwa musa ukulibala ukuba udumo olugqithiseleyo luyabuyisa, kwaye ubunzima bunzima kwaye bunzima. Ukuba umntwana akakwazi ukuzalisa nayiphi na isicelo okanye imfuno, ngoko unokufumana uncedo lokungenakunceda kunye nokungenakunceda, ukuziphatha kakubi kubazali bakhe.
Umlinganiselo uyimfuneko kuyo yonke into, kubandakanywa nemfundo. Awukwazi ukulawula ngokuziphatha komntwana, ulawule rhoqo kwaye uyilungise, bonisa ukuba ekubeni umntwana engenakwenzeka ukuba afunde ukwenza izigqibo ngokwakhe. Eyona nto ingonakalisa kwimfundo yokungagxininisi: kukho amaxesha apho umntwana engekho ngexesha elihlawuliweyo, kwaye iphosakeli elincinci le nkwenkwe liva ukungayeki "i-tirade" kwimfundo. Ukukhawuleza okanye ukuyala ithoni, ukunyaniseka kubangela ukuba umntwana angqine. Kwaye nangona beminyaka encinci, abantwana banokukhawuleza bakhuphe izikhalazo, ukusebenzisa kakubi le mfanelo akufanelekile. Into yokuqala abazali kufuneka bayenze ukuhlaziya ubomi kunye nendlela yokuphila kwintsapho, imikhwa kunye nobuhlobo phakathi kwamalungu ayo.
Umdlalo wabantwana ngumsebenzi omkhulu. Abantu abadala kufuneka baqonde ukuba kwimidlalo yezingane kukho iinkqubo zexesha elizayo lomsebenzi, kwaye ngokufanelekileyo abazali kufuneka bathunyelwe kwaye bathathe inxaxheba kuwo.
Ukufikelela kwiminyaka emithathu, umntwana unamathoyizi okwaneleyo kunye nentlalo yabantu abadala, kodwa emva kweminyaka emine akwanele. Umntwana uqala ukufuna ukunxibelelana nabanye abantwana. Njengomthetho, abantwana bathambekele ekunxibelelana nabantwana abadala kunabo kwaye ukuba bengabamkeli, bayakhubeka. Bavakalelwa kukuba sele beyazi kakhulu kwaye bafuna ukuyibonisa. Ngoko ke, ukunxibelelana nabantwana beminyaka yabo kubaluleke kakhulu. Ukuba kukho umntwana ongaphezu kweyodwa kwintsapho, ngoko umnqweno unelisekile kumlinganiselo othile. Nangona kunjalo, musa ukunciphisa uxhulumaniso lomntwana kuphela kunye namalungu entsapho. Ukuphuhlisa ngokuqhelekileyo, umntwana udinga abahlobo bakhe ontanga - kukuba nabo banokuvakalelwa ngokulinganayo. Xa uxoxisana nabanye abantwana, umntwana uya kukwazi ukukhusela uluvo lwakhe, kunye nokujonga ngokucinga kwabanye. Kulo nyaka unamathelisi aqala ukuvela, okuyiyo ngenye indlela intsholongwane yobuhlobo.
Kubantwana abanjalo, ukucinga kukhonkco ngakumbi. Umntwana ufunda ngokucacileyo oko akubonayo ngokucacileyo, uzama ukufunda konke kumava akhe. Uninzi kunabo bonke, unomdla kwizenzo zabantu abadala abazama ukufihla. Ingane ayikhumbuli yonke into, kodwa yintoni eyamenza ammangalise. Ngelo xesha, bonke abantwana bazama ukuxelisa abantu abadala, apho kwezinye iimeko ziyingozi kakhulu, kuba abantwana bangabumba iingcamango "ezilungileyo" kunye "ezimbi." Abantwana bahlala bexelisa oko abantu abadala abakwenzayo ngenzondelelo abantwana, kodwa bona ngokwabo bayavuma ukuba benze njalo. Ngoko ke, ebusweni babantwana, umntu kufuneka aziphathe ngokunyanisekileyo ngaphandle kokuthatha isenzo kunye nezenzo ezingengomzekelo omhle wokulingisa.
Ngokwenza into ethile, umntwana oneminyaka engama-3-4 akazami ukwenza into kakuhle okanye enze into, kuba kuyimfuneko, uyakwenza ngenxa yokuba unomdla kwaye ufuna. Ngako oko, kubalulekile ukufundisa abantwana malunga nendlela yokusebenza kwiimeko ezithile, oko kunokukwenziwa kunye noko kungenakwenziwa: kungekhona ukuthabatha amathoyizi, kodwa ukwabelana ngawo, ukulungelelanisa iminqweno kunye neminqweno yabanye abantwana, njl.
Iimpawu kunye nomlinganiswa ngoluhlobo lwegazi
Ukuba umntwana uyabulala unina
Indlela yokukhetha indawo yesikhalazo somntwana
I-Bartholinitis - ukuvuvukala kwethambo likaBathoholin
Ngenxa ye-Maxim Galkin yomboniso u-Alla Pugachyova waxelwa phambi kweekhamera
Ukucwangciswa nokugcinwa kwemveliso yokutya
Thenga iintlobo zeentyantyambo zeBach
Imibala yeenwele xa uncelisa
Ikhefu lokuvula ityhila
Imithetho yococeko kumntwana osandul 'ukuzalwa
Iimpawu eziphambili ze-pancakes: iziqhamo, inyama kunye ne-cottage cheese
Indlela yokulahlekelwa isisindo ehlobo kunye neziqhamo kunye nemifuno